JINGYE Mixing Tank dia kaontenera fitehirizana sy fampifangaroana fitaovana. nanao araka ny fenitry ny indostria henjana, JINGYE Mixing Tank dia manana MANANGANAd sanda ho an'ny mpanjifanay. Manompo ny tanky mifangaros indostria isan-karazany ary iSIKA dia nanangona traikefa manan-karena amin'ny famokarana&famolavolana. Na milaasio fonosana ho an'ny banga na tsindry DINGANA, asio palitao ho an'ny fampangatsiahana na fanafanana, ampio mixer ho emulsify na hanaparitaka, ny tankinay dia azo noforonina mba hiantohana ny fizotran'ny fanodinanao.
JINGYE Mixing Tank dia vita amin'ny vy vy, be mpampiasa amin'ny:
1. Ny indostrian'ny Sakafo sy zava-pisotro, toy ny jam, saosy voatabia, paty, ronono, zava-pisotro, divay, rano fisotro, sns.
2. Ny Indostria Simika isan'andro, toy ny menaka fanosotra amin'ny hoditra, shampooing, krema amin'ny vatana, sns;
6.Customization fepetra takiana azo ekena;
1.Adopt fitaovana ara-tsakafo sy kojakoja fidiovana, aza harafesina, miantoka ny fiarovana ny famokarana.
2.It dia azo ampifandraisina amin'ny alàlan'ny fantsona sy valves, miaraka amin'ny boaty fanaraha-maso PLC mandeha ho azy, mba hahatsapany ny automatisation feno ny fizotry ny famokarana, hitsitsy ny vidin'ny asa, hanatsara ny fahafaha-mamokatra ary ny tombom-barotra ho an'ny mpanjifa.
Mari-pana endrika (L)
Azontsika atao ny manamboatra ny fitaovana mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Teo aloha: Sterilizing Retort